Apokalypsy 9 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
9 Ary nitsoka ny trompetrany+ ny anjely fahadimy. Ary hitako fa nisy kintana+ avy any an-danitra nilatsaka tetỳ an-tany, ary nomena azy io ny lakilen’ny+ lavaka mangitsokitsoka.+ 2 Dia nosokafany ilay lavaka mangitsokitsoka, ka nisy setroka+ nivoaka avy tao, toy ny setroky ny lafaoro+ lehibe, ary nanamaizina ny masoandro+ sy ny rivotra ny setrok’ilay lavaka. 3 Ary avy tao amin’ny setroka dia nisy valala+ nivoaka nankeo amin’ny tany. Ary nomena fahefana ireo valala, toy ny fahefan’ny maingoky+ ny tany. 4 Dia nilazana izy ireo mba tsy hanimba ny zavamaniry amin’ny tany na ny ahi-maitso na ny hazo, fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasen’Andriamanitra eo amin’ny handriny+ ihany. 5 Ary ireo valala dia tsy navela hahafaty azy ireny, fa ny hampijaly+ azy dimy volana kosa. Ary ny fampijaliana azy dia toy ny fampijalian’ny maingoka+ rehefa mamely olona. 6 Dia hitady fahafatesana+ ny olona amin’izany andro izany fa tsy hahita mihitsy, ary haniry ho faty izy nefa handositra azy foana ny fahafatesana. 7 Ary tahaka ny soavaly+ voaomana ho amin’ny ady no fahitana ireo valala. Nisy toa satroboninahitra hoatran’ny volamena teo amin’ny lohany, ary ny tarehiny dia tahaka ny tarehin’olona,+ 8 ary ny volony tahaka ny volom-behivavy,+ ary ny nifiny tahaka ny an’ny liona,+ 9 ary nanana fiarovan-tratra+ tahaka ny fiarovan-tratra vy izy ireo. Ary ny feon’ny elany dia tahaka ny feon’ny kalesy+ tarihin-tsoavaly maro mihazakazaka ho amin’ny ady.+ 10 Nanan-drambo sy fanindronana toy ny maingoka+ koa izy ireo, ary tao amin’ny rambony no nisy ny fahefany hampanaintaina ny olona nandritra ny dimy volana. 11 Nanana mpanjaka izy ireo, dia ny anjelin’ny lavaka mangitsokitsoka:+ Abadona* no anarany amin’ny teny hebreo, fa Apolyona* kosa amin’ny teny grika.+ 12 Lasa ny loza iray. Misy loza+ roa hafa koa ho avy aorian’izany. 13 Ary nitsoka ny trompetrany+ ny anjely+ fahenina, dia nahare feo+ avy teo amin’ny tandroky ny alitara+ volamena izay teo anatrehan’Andriamanitra aho. 14 Hoy ilay feo tamin’ilay anjely fahenina nanana ny trompetra: “Mba vahao ny anjely+ efatra mifatotra+ eo amin’i Eofrata,+ ilay renirano lehibe.” 15 Dia novahana ireo anjely efatra, izay efa voaomana ho amin’izany ora sy andro sy volana sy taona izany, mba hamono hahafaty ny ampahatelon’ny olona. 16 Ary roa alina ampitomboina iray alina ny isan’ny miaramila mpitaingin-tsoavaly: Reko ny isany. 17 Ary toy izao no nahitako ireo soavaly tao amin’ilay fahitana sy izay nitaingina azy: Nanana fiarovan-tratra mena toy ny afo sy manga ary mavo toy ny solifara ireo nitaingina azy, ary ny lohan’ny soavaly dia tahaka ny lohan’ny liona,+ ary nisy afo sy setroka sy solifara+ nivoaka avy tamin’ny vavany. 18 Ireto loza telo ireto no namonoana ho faty ny ampahatelon’ny olona, dia avy tamin’ny afo sy ny setroka ary ny solifara nivoaka avy tamin’ny vavan’ny soavaly. 19 Fa teo amin’ny vavany sy ny rambony no nisy ny fahefany, satria ny rambony dia toy ny bibilava+ sady nisy lohany, ary nentiny nampahory izany. 20 Ny sisa tamin’ny olona tsy matin’ireo loza ireo anefa dia tsy nibebaka tamin’izay nataon’ny tanany,+ fa mbola nivavaka ihany tamin’ny demonia+ sy ny sampy volamena sy volafotsy+ sy varahina sy vato ary hazo, izay tsy afaka mahita na mandre na mandeha.+ 21 Ary tsy nibebaka tamin’ny vonoan’olona+ sy ny filalaovany ody+ sy ny fijangajangana ary ny halatra nataony izy ireo.
^ Heb.: “fandringanana.”
^ Gr.: “mpandringana.”